Propafenone - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Propafenone
Generic Name: Propafenone Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Propafenone ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
Propafenoneကိုပြင်းထန်တဲ့(သေစေနိုင်တဲ့)နှလုံးခုန်မမှန်ခြင်းတွေ(ဥပမာparoxysmal supraventricular tachycardia ရောဂါနဲ့ atrial fibrillationရောဂါ)တို့ကိုကုသဖို့အတွက်သုံးပါတယ်။၎င်းကိုပုံမှန်နှလုံးခုန်စည်းချက်ပြန်ရရန်နဲ့ပုံမှန်ဖြစ်ပြီးတည်ငြိမ်တဲ့နှလုံးခုန်နှုန်းကိုထိန်းထားရန်အတွက်သုံးပါတယ်။Propafenoneကိုနှလုံးခုန်စည်းချက်မမှန်တာကိုကုသတဲ့ဆေးအဖြစ်သိကြပါတယ်။၎င်းဟာနှလုံးခုန်မမှန်တာကိုဖြစ်စေတဲ့နှလုံးတွင်းရှိဓါတ်စီးမှုတွေကိုတားဆီးပေးပါတယ်။ နှလုံးခုန်မမှန်တာကိုကုသခြင်းအားဖြင့်သွေးခဲဖြစ်နိုင်ချေကိုလျှော့ချပေးနိုင်ပြီးအဲအတွက်ကြောင့်သင့်မှာနှလုံးရောဂါဖောက်နိုင်ချေနဲ့လေဖြတ်မှုတို့ရနိုင်ချေကိုလျော့ကျစေပါတယ်။
Propafenoneကိုအခန်းအပူချိန်မှာထားတာအကောင်းဆုံးပါ။ တိုက်ရိုက်နေရောင်ထိတွေ့နိုင်သောနေရာနှင့်စိုစွတ်နေတဲ့နေရာတွေကနေဝေးဝေးထားပါ။ ဆေးအာနိသင်မပျက်အောင်ဆေးကိုရေချိုးခန်းနဲ့ရေခဲသေတ္တာထဲကိုမထည့်ထားသင့်ပါ။Propafenoneဆေးအမျိုးအစားပေါ်မူတည်ပြီးဆေးထိန်းသိမ်းပုံလိုအပ်ချက်လည်းကွာခြားနိုင်ပါတယ်။ ဆေးကိုသိမ်းဆည်းဖို့အတွက်ဆေးထုပ်ပေါ်မှာရှိတဲ့ညွှန်ကြားချက်များကိုဖတ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ်သင့်ရဲ့ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကိုလည်းမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။ ကလေးတွေနဲ့အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တွေဘေးကင်းဖို့အတွက်ဆေးကိုသူတို့နဲ့ဝေးရာမှာထားသင့်ပါတယ်။
Propafenoneကိုအိမ်သာထဲကိုပစ်ချတာနဲ့ရေထွက်ပေါက်တွေထဲကနေဆေးချတာမျိုးကိုမလုပ်သင့်ပါဘူး။ ဆေးဝါးတွေကိုမလိုအပ်တော့တဲ့အခါဒါမှမဟုတ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားတဲ့အခါတွေမှာစနစ်တကျစွန့်ပစ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ ဆေးဝါးများကိုစနစ်တကျဘယ်လိုစွန့်ပစ်ရမယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့သင့်ရဲ့ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နဲ့တိုင်ပင်ပါ။
Propafenone အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
Propafenoneကိုအသုံးမပြုခင်သင့်မှာယခုဆေးနဲ့သို့မဟုတ်အခြားဆေးတွေနဲ့ဓါတ်မတည့်တာမျိုးတွေရှိရင်သင့်ရဲ့ဆရာဝန်သို့မဟုတ်ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကိုပြောပြပါ။ ယခုဆေးမှာဆေးနဲ့ဓါတ်မတည့်တာတွေသို့မဟုတ်တခြားဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်စေနိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေပါတတ်ပါတယ်။ အသေးစိတ်အတွက်သင့်ရဲ့ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကိုပြောပြပါ။
ယခုဆေးဟာသင့်ကိုမူးဝေစေပါတယ်။ အရက်နဲ့ဆေးခြောက်တွေသုံးမယ်ဆိုသင့်ကိုပိုပြီးမူးဝေစေမှာပါ။ အဲဒါကြောင့်သင့်အနေနဲ့ကောင်းကောင်းပြန်ပြီးအလုပ်မလုပ်နိုင်သေးသ၍ကားမမောင်းပါနဲ့။ စက်တွေကိုအသုံးမပြုပါနဲ့။ နောက်ပြီးအမြဲတမ်းနိုးကြားတက်ကြွနေရန်လိုအပ်တဲ့အလုပ်တွေကိုမလုပ်ပါနဲ့။ အရက်သေစာသောက်စားခြင်းကိုရှောင်ကြဉ်ပါ။ သင်ဆေးခြောက်တွေသုံးနေတယ်ဆိုရင်သင့်ဆရာဝန်ကိုပြောပြပါ။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Propafenone ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
ယခုဆေးဝါးကိုကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန်နှင့်ကလေးနို့တိုက်နေချိန်တွင်အသုံးပြုလျှင်ဆိုးကျိုးများရှိမရှိကိုဆုံးဖြတ်နိုင်ရန်အတွက်လုံလောက်သောလေ့လာစမ်းသပ်ချက်များမရှိပါ။ ဆေးမသောက်သုံးမီတွင်ဖြစ်နိုင်ချေကောင်းကျိုးများနှင့်ဆိုးကျိုးများအားလုံးကိုချိန်ဆနိုင်ရန်အတွက်သင့်ရဲ့ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ပါ။ အမေရိကန်နိုင်ငံအစားအသောက်နဲ့ဆေးဝါးစီမံကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့(FDA)ကPropafenoneကိုကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ်ဆိုးကျိုးရနိုင်ခြေအဆင့်Cလို့သတ်မှတ်ထားပါတယ်။
Propafenone ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
ဘယ်ဆေးတွေက Propafenone နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Propafenoneအပြင်အခြားဆေးတော်တော်များများကလည်းနှလုံးခုန်ပုံစံကိုသက်ရောက်မှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်။(QT prolongation) ဥပမာamiodarone,dofetilide,flecainide,pimozide,procainamide,quinidine,sotalol,macrolideပိုးသတ်ဆေးများ(ဥပမာclarithromycin,erythromycin),နဲ့အချို့သောquinoloneပိုးသတ်ဆေးများ(ဥပမာsparfloxacin)တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ (သတိပြုရမည့်အရာများ အကြောင်းကိုလည်းဆက်ဖတ်ပါ)
အခြားဆေးတွေဟာသင့်ခန္ဓါကိုယ်ကနေpropafenoneဆေးစွန့်ထုတ်တာကိုသက်ရောက်နိုင်ပြီးpropafenoneဆေးအလုပ်လုပ်တာကိုထိခိုက်နိုင်ပါတယ်။ဥပမာအားဖြင့်asunaprevir,desipramine,ketoconazole,orlistat,phenobarbital,phenytoin,rifampin,နဲ့HIV protease တားဆေးများ(ဥပမာritonavir,tipranavir)နဲ့အခြားဆေးတွေဖြစ်ပါတယ်။
Propafenoneကသင်လက်ရှိသောက်နေတဲ့အခြားဆေးတွေနဲ့ဓါတ်ပြုပြီးဆေးရဲ့ထိရောက်မှုနဲ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးရနိုင်ခြေကိုပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ဆေးဝါးဓါတ်ပြုမှုတွေမဖြစ်လာအောင်လို့သင်လက်ရှိသောက်သုံးနေတဲ့ဆေးဝါးတွေအားလုံးရဲ့စာရင်းကိုလုပ်ထားပြီး(စာရင်းလုပ်တဲ့အခါမှာဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားတာတွေ၊မညွှန်ကြားဘဲသောက်သုံးနေတာတွေ၊သဘာဝဆေးဘက်ဝင်ပစ္စည်းတွေအားလုံးပါဝင်ပါတယ်)ဆရာဝန်ဒါမှမဟုတ်ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကိုအမြဲပြောပြပါ။ ဆေးဝါးတွေကိုဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက်မပါဘဲသောက်သုံးခြင်း၊ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ပမာဏကိုပြောင်းလဲခြင်းတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Propafenone နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
သင့်ဆရာဝန်သို့မဟုတ်ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ရဲ့ခွင့်ပြုချက်မရပါကယခုဆေးကိုသုံးနေစဉ်စပျစ်သီးစားခြင်းနဲ့စပျစ်သီးဖျော်ရည်သောက်ခြင်းကိုရှောင်ကြဉ်ပါ။ စပျစ်သီးဟာယခုဆေးရဲ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေရနိုင်ချေကိုမြင့်တက်စေနိုင်ပါတယ်။ အသေးစိတ်အတွက်ဆရာဝန်သို့မဟုတ်ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကိုမေးမြန်းပါ။
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Propafenone နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Propafenoneဟာသင့်ရဲ့နဂိုကျန်းမာရေးအခြေအနေများနဲ့သက်ရောက်ဓါတ်ပြုမှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေကိုပိုဆိုးသွားစေတာဒါမှမဟုတ်ဆေးသက်ရောက်မှုပုံစံပြောင်းလဲသွားတာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့်သင့်ရဲ့လက်ရှိကျန်းမာရေးအခြေအနေအကုန်လုံးကိုသင့်ရဲ့ဆရာဝန်ဒါမှမဟုတ်ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကိုအသိပေးဖို့အရေးကြီးပါတယ်။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Propafenone ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
Atrial flutter ရောဂါအတွက်အရွယ်ရောက်ပြီးသူသောက်ရန်ဆေးပမာဏ
Ventricular tachycardia ရောဂါအတွက်အရွယ်ရောက်ပြီးသူသောက်ရန်ဆေးပမာဏ
ECGရှိ QRS complex ကျယ်နေတဲ့လူနာတွေသို့မဟုတ် secondသို့မဟုတ်third degree AV blockရနေတဲ့လူနာတွေမှာဆေးပမာဏလျှော့ရန်စဉ်းစားသင့်ပါတယ်။
ကလေးတွေအတွက် Propafenone ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
Propafenoneဆေးကိုသောက်ဖို့လွတ်သွားခဲ့ပါက(မေ့ခဲ့ပါက)သတိရတဲ့အချိန်မှာအမြန်ဆုံးသောက်ပါ။ သို့သော်လည်းနောက်တစ်ကြိမ်ဆေးသောက်ရမယ့်အချိန်နဲ့နီးကပ်နေပြီဆိုရင်တော့လွတ်သွားတဲ့အကြိမ်ကိုကျော်ပြီးပုံမှန်အချိန်မှာပဲသောက်လိုက်ပါ။ ဆေးပမာဏကိုနှစ်ဆတိုးသောက်တာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့။
တည်းဖြတ်သည့်နေ့ နိုဝင်ဘာ 26, 2018 | နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်ခြင်း မေ 21, 2019